Aloolaa kuusdeetaa keessatti, gabatee harkisuun fi dhiisuun gara qabee gabateetti garagalchuu dandeessa. Saanduqa Filannoo Deetaa miiltessi jedhurraa qaaqa fuula tokkooffaa Gabatee garagalchi yoo filatte, qaaqni Tarjaalee moggaasi akka foddaa lammaffaatti banama. Qaaqa kanatti fayyadamuun deetaa gabatee maddaa keessa jiru gara gabatee ga'uumsaa waliin wal qabsiisuu dandeessa.
Gabatee maddaa keessa dirreewwan deetaa jiran tarreessa. Dirree deetaa gabatee maddaa keessaa gara gabatee ga'umsaattii walitti qabuuf, fuuldura maqaa dirree deetaatti saanduqa to'annoo filadhu. Qabiyyee dirree deetaa madda gabatee gara dirree deetaa addaa gabatee ga'umsaa waliin walitti qabsiisuuf, dirree deetaa gabatee maddaa tarreesaa cuqaasi, fi sana booda xiyya olee ykn gadee cuqaasi. Gabatee ga'uumsaa keessatti madda dirreewwan deetaa hunda qabachuuf , Hundacuqaasi.
Dirreewwan deetaa gabatee ga'uumsaa keessa jiran tarreessa. Dirreewwan deetaa gabatee maddaa keessatti filaman qofatu gabatee ga'umsaa keessatti tarreeffama.
Tarree keessaa dirreewwan deetaa hundaa fila.
Saanduqa filannoo tarree keessa jiru hundasa haqa.
Title is: Tarjaalee moggaasi